I-Raw Coluracetam Powder (135463-81-9) Abavelisi-Phcoker
I-Raw Coluracetam powder lilungu elitsha kunye nelodwa kwiklasi ye-racetam ye-nootropics yokwenziwa. Ekuqaleni yaphuhliswa njenge… ..
IColuracetam (MKC-231) sisiyobisi esenziwe njenge-racetam ekuthiwa siyinxalenye ye-nootropic. Izifundo zicebisa ukuba inokuphucula ukuqonda kunye nenkumbulo, kwaye abasebenzisi bathi ikwaphucula ukugxila, ukugxila kumbono.
IColuracetam inyusa ukuthathwa kwe-choline ephezulu (HACU), inyathelo lokunciphisa umda we-acetylcholine (ACh) synthesis. Izifundo zibonise i-coluracetam powder ukuphucula ukukhubazeka kokufunda kwidosi enye yomlomo enikwe iigundane ezivezwe kwii-neurotoxins ze-cholinergic. Izifundo ezilandelayo zibonakalise ukuba zinokubangela ukuba abantu bafumane iziphumo ezihlala ixesha elide kwi-cholinergic neurotoxin ephathwe ngamagundane ngokutshintsha inkqubo yokuhambisa umthuthi.
Uhlalutyo lweziBonelelo zezeMpilo zeNootropic Coluracetam eNtsha kwiBongo